FAQs - Linyi Thunder isdabamarinta Co., Ltd
Ma waxaad u baarka free?
A: Haa, laakiin ma aha, waayo, wax soo saarka oo dhan. Waayo-baarka oo lacag la'aan ah, waxaan kaliya u baahan tahay lambarka xisaabta dhiibay warqaadayaal. Waayo, qaar ka mid ah waxyaabaha qiimaha sare, waxaa sidoo kale loo baahan yahay lacag muunad. Laakiin lacag saamiga laga jari kartaa marka aad meel amarka.
Waa maxay lacagta aad?
A: Lacagta: aqbali karno T / T, / L C.
Muddo intee le'eg ku saabsan waqtiga dhalmada aad?
Sida laga soo xigtay tirada iyo waxyaabaha aad ka dalban, sida caadiga ah 7 ~ muddo 30 after receipt of your order and deposit, and we choose the best forwarder to supply service for both of us.
Ha aad aqbasho mashruuca OEM?
Si OEM waxaa si diiran u soo dhaweeyay in Dawn Marine. Waxaan leenahay badan oo waayo-aragnimo lagu guuleystay in samaynaya mashaariic OEM. Dheeraad ah oo dheeraad ah, waxaan heysanaa koox design kuwaas oo ku siin kara talooyin xirfadeed.
Ma badeecada baaro ka hor maraakiibta?
Haa, oo dhan ee alaabta our ayaa la soo baxday ka hor maraakiibta.
Ha aad aqbasho tiro si yar?
Waa hagaag, waxaan dhihi lahaa waxay ku xiran tahay. Haddii aan leeyihiin stock ama la mid ah alaabta on line wax soo saarka, waxaan kuu diyaarin kari waayeen. Haddii kale, waxaan u baahanahay inaan xal u wada heli. Laakiin waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u buuxiyaan shuruudaha aad.
Sidee ayaan ku noqon kartaa dealer gaar ah?
Waa hagaag, waxaan dhihi lahaa waxa ay ku xiran tahay gobolada kala duwan, wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan la tasho wakiilada iibka our.
waxaan yeelan karaan booqasho aad warshad?
Ku soo dhawow our warshad, iyo ayaanu bixinaa adeeg qaado-up.
Chain Link Long , khafiyad Block , Chain khafiyad Block , qaadayso Hardware isdabamarinta , isdabamarinta Hardware , Chain Link,